Home » Lahatsoratra ho an'ny vahiny » Fa maninona no mbola tsy mifidy amin'ny Internet isika?
Nahavita nandresy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena amerikana i Joe Biden, nandresy an'i Donald Trump tamin'ny hazakazaka tery. Elaela vao nanisa ny vato satria vato marobe no nampitaina tamin'ny mailaka. Noterena hatory mandritra ny alina ny olona ary hijery ny CNN mba tsy hanadino ireo vaovao manandanja. Zavatra tsara fa misy ny valim-pifidianana ary manana mpandresy mazava isika. Raha jerena ny areti-mandringana COVID-19 mitohy, tsy lazaina intsony ny resabe manodidina ny bileta fandefasana mailaka, ara-dalàna raha te hahalala ny antony tsy nampidirina ny latsa-bato.
Tsy afaka mifidy an-tserasera isika izao, izay tena tsy nampoizina raha jerena fa ao amin'ny Internet izao rehetra izao. Miantsena an-tserasera izahay, mijery sarimihetsika amin'ny Netflix, ary mitsidika tranombakoka zavakanto manerantany aza. Noho izany, ahoana no tsy ahafahana mifidy amin'ny Internet? Ny fifidianana amin'ny alàlan'ny Internet dia miteraka fanamby maro, izay azo lazaina momba ny fandrahonana amin'ny fiarovana.
Ny fifidianana an-tserasera azo antoka dia mbola tsy azo tanterahina
Nandritra izay roa taona lasa izay, ny fifidianana filoham-pirenena amerikana dia lasibatra tamin'ny fanafihana an-tserasera nataon'ny mpitsikilo vahiny. Tamin'ny taona 2016 dia nino fa nanelingelina ny fampielezan-kevitr'i Hillary Clinton i Russia, ary nanamafy ny filatsahan'i Donald Trump, na dia tsy misy porofo matanjaka aza amin'io lafiny io. Misy milaza fa ny hack 2020 dia voajirika, Iran sy Russia dia toa misy ifandraisany amin'izany. Ny fotoana ihany no hahafantarana raha marina izany na tsia. Ny zava-dehibe tokony ho fantatra dia tsy azo antoka amin'ny hackers ny angona an-tserasera. Tsy misy antoka fa tsy misy malware manimba ny valiny ary manodinkodina ny vato.
Manintona tokoa ny hevitra momba ny fifidianana amin'ny Internet, saingy tsy azo ampiharina. Andao hieritreritra fa mampiasa ny olona proxy fonenana maharitra hiarovana ny hetsika ataon'izy ireo an-tserasera. Na dia afaka miaro ny solosaina amin'ny karazana fandrahonana aza ny mpizara proxy, ao anatin'izany ny malware, azo atao tsara ny lasa iharan'ny hack hack proxy. Proxy fonenana tsy mihetsika, miaraka amin'ny VPN, dia afaka miaro anao amin'ny mpilalao sarimihetsika malemy, fa tsy mahasakana ireo mpilalao lehibe. Tsy ny mpijirika rehetra dia noforonina mitovy, mba fantatrao ihany. Mampalahelo fa tsy teknolojia azo iainana ny fifidianana an-tserasera. Antenaina fa hiova ny toe-javatra ary hampidirina tsy ho ela ny fifidianana amin'ny Internet.
Ny taratasy dia haitao fampiasa amin'ny fifidianana farany
Satria mijanona ho olana tsy azo tsinontsinoavina ny fiarovana ny cyber », tsy manan-tsafidy isika fa hiantehitra hatrany amin'ny latsa-bato. Mety hahagaga raha toa, ny taratasy dia sombin-teknolojia tsy mampino izay tsy azo ovaina ary, indrindra indrindra, tsy azo ovaina. Raha voatsimbadika ny vato na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, dia hisy foana ny porofo. Amin'ny fotoana iray, Amerika dia hanao soa aman-tsara ny tetezamita amin'ny taratasy mankany amin'ny paperless. Miresaka momba ny rafitra elektronika feno izahay izay mampiseho lahatsoratra amin'ny fiteny isan-karazany ary manampy ireo manana fahasembanana amin'ny fahitana. Mandritra izany fotoana izany, faly izahay manana bileta taratasy.
Raha manana vaksinina ho an'ny coronavirus vaovao isika, dia ho afaka hampiditra ny fifidianana amin'ny Internet ihany koa. Tsy maninona ny mitazona ny fanantenantsika, na izany na tsy izany.